70 Waraaqo oo loogu talagalay Labada Shaashad | Abuurista khadka tooska ah
Waxaan u maleynayaa inaanan noqon doonin qofka kaliya ee halkaan ka shaqeeya oo adeegsada kombiyuutarka oo leh qaab shaashad Dual, maadaama inbadan oo naga mid ah ay ku dhowdahay inay lama huraan tahay markaan la shaqeyneyno kombiyuutarradeena.
Laakiin waxa aan sidaa u sahlanayn waa in la helo sawir-qaade ku habboon in lagu isticmaalo laba shaashad isku mar, wax nasiib wanaag aan ku xallin karno isku-dubbaridkan.
Wax aan ka yarayn 70 sawir-gacmeedyo ayaa loogu talagalay Dual Screen, ka dib boodka.
1 1.Butterfly dual saameyn
2 2.Pale orchid laba shaashad
3 3.Koox farabadan
4 4.Dhiqan Pink
5 5.Jaalaha iftiinkiisa
6 6. Orchid
7 7.Mar qorrax dhaca weyn
8 8. Dabeecad Iftiin ah
9 9. Xeebta Galbeed
11 11.West Lake ee Qorrax dhaca
12 12.Jaale Mid ah
13 13.Tiger Fiirinta
14 14.Lisard on jir ah
16 16. Meeye Daan-ku-kaygu?
17 17 haye adiga
18 18. Saddex Walaal Wolves
19 19.Soorka Shabeel
20 20 Nacnac
21 21.Shaag cad
22 22. Baqbaqaaq
23 23.Quruxda Madow
24 24. flamingos
26 Farshaxan Fantasy
27 26 Muujinta Weyn
28 27. Muuqaalka Subax
29 28. Faras aan la magacaabin
30 29. Muuqaal Riyoon
31 30.Dhibaatada Dunida
32 31.Muuqaal caajis ah
33 32. Adduun Riyoonaya oo Shaashad Wide ah
34 33.Dunyo Riyo
35 34. Qabyo Qoraal
36 35.Dhiig Mill
37 36.Ku istaag Moorea
38 37.Dhammaan kali Adduun
39 38.Blue Kay
40 39.Waa Meelna
41 Sawirro dardaaran
42 40.Musroomka Samba
43 41. Kormeeraha ubax ee labada dhinac ah
44 42 swirlz
45 43.14 Dagaalkii
46 44.Carbiraha rinjiga
49 47. Muujinta midabada dhalaalaya
50 48. Waqtiga Quudinta
54 52 Bokeh Remix
55 53.Apple iPad
56 3D laba sawir oo sawir leh
57 54.Byy & Balanbaaljoog
58 55. Naqshad Casri ah
59 56 Qalfoosh
60 57.War Midab leh
62 59. Lix nooc
63 60. Casaan Maqaar ah
64 61. Hindisaha ugu weyn
65 62. RTX Wargeyska
66 63. Habeennada Muuqaalka Badan
68 64.Waxay goysay ubaxyo
69 65. Muuqaalka cirfiidka
70 66. Sare Mario Galaxy
71 67.Groket Red Dual
72 68 Waraaq Waraaqeed
73 69. jasiiradda kulaylaha ah
74 70.Yin iyo Yang
1.Butterfly dual saameyn
Ku raaxeysiga cabitaanka macaan maalin cadceed leh.
2.Pale orchid laba shaashad
7.Mar qorrax dhaca weyn
8. Dabeecad Iftiin ah
9. Xeebta Galbeed
11.West Lake ee Qorrax dhaca
12.Jaale Mid ah
Xayawaanka iyo Shimbiraha
14.Lisard on jir ah
Ku raaxeysiga isku midab.
16. Meeye Daan-ku-kaygu?
17 haye adiga
18. Saddex Walaal Wolves
Ku faraxsan saaxiibtinimadayada.
Kibir shabeel - Fiiriya.
Ku tiirsanaanta diirimaadka dabiiciga.
Isku-darka dhifka ah ee dabiiciga ah ee leh midabbada kala duwan ee quruxdan madow.
Farshaxanka khiyaali ahi wuu sarreeyaa oo wuxuu si xoog leh ugu xiran yahay mala-awaalka. Runtii sawirada farshaxanka khiyaaliga ah waxaa badanaa loogu tala galay inay matalaan jilayaal gaar ah ama muuqaallo laga soo qaatay shaqooyinka suugaanta khiyaaliga ah. Shaqooyinka noocan oo kale ah oo ay abuureen fanaaniinta hiwaayadda ayaa lagu magacaabi karaa farshaxanka fan.
26 Muujinta Weyn
27. Muuqaalka Subax
28. Faras aan la magacaabin
29. Muuqaal Riyoon
31.Muuqaal caajis ah
32. Adduun Riyoonaya oo Shaashad Wide ah
34. Qabyo Qoraal
36.Ku istaag Moorea
37.Dhammaan kali Adduun
Waraaqda duugga ah, waraaqaha aan sawirada lahayn, waraaqda aan ujeedka lahayn, iyo waraaqda aan meteleynin waa ereyo si dabacsan u la xiriira. Way isku egyihiin, inkasta oo laga yaabo inaysan ahayn macno isku mid ah.Qormooyinku waxay muujinayaan ka bixitaan dhab ah oo muujinaya sawirka farshaxanka.
41. Kormeeraha ubax ee labada dhinac ah
Qulqulka rinjiga sida rinjiyeynta cajiibka ah.
47. Muujinta midabada dhalaalaya
48. Waqtiga Quudinta
52 Bokeh Remix
3D laba sawir oo sawir leh
Mid ka mid ah darbiyada muhiimka ah ee xiisaha leh ayaa ah seddex cabbir (3D) asalka desktop-ka. Halkan waxaan ku keenaynaa sida ugu fiican.
54.Byy & Balanbaaljoog
55. Naqshad Casri ah
57.War Midab leh
59. Lix nooc
60. Casaan Maqaar ah
61. Hindisaha ugu weyn
62. RTX Wargeyska
63. Habeennada Muuqaalka Badan
Waxay ka kooban tahay qaybo kala duwan ama walxo yeelashada astaamo kala duwan, karti, ama muuqaal.
64.Waxay goysay ubaxyo
65. Muuqaalka cirfiidka
66. Sare Mario Galaxy
67.Groket Red Dual
68 Waraaq Waraaqeed
69. jasiiradda kulaylaha ah
70.Yin iyo Yang
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » 70 Waraaqo loogu talagalay labada shaashad